धनी बन्ने इ‘च्छा छ ? ध र्मशास्त्र भन्छ- जि*न्दगीमा कहिल्यै न’गर्नुहोस् यी ९ गल्ती जय लक्ष्मी मातासबैले सेयर गरौ। – Khabar Chautari
धनी बन्ने इ‘च्छा छ ? ध र्मशास्त्र भन्छ- जि*न्दगीमा कहिल्यै न’गर्नुहोस् यी ९ गल्ती जय लक्ष्मी मातासबैले सेयर गरौ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०७, २०७७ समय: १८:१४:३५
ॐ ॐ धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक संकट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन शास्त्रका केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही गल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।“महिलासँग दूश्मनी शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।
काठमाडौं । आज प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको हिउदे अधिवेशन शुरु हुदै छ । दुवै प्रदेशको यस अधिवेशनमा सरकारविरुद्धका अविश्वास प्रस्तावले गर्दा चर्चा बढेको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल दुवै नेकपाको ओली पक्षका नेता हुन् । दुवैविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अब प्रदेश सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने यो अधिवेशनले टुंगो लगाउने छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रदेश १ मा ३७ सासंदको हस्ताक्षरसहित पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपनि अहिलेसम्म ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । तर मंगलबार भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकमा ३३ जना सांसद उपस्थित भएको बताइएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ४७ मत आवश्यक पर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्द अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपनि उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकारलाई बचाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्दछ । नेकपाका सांसद ८० जना रहेकोमा तीमध्ये प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका मात्र ४६ सांसद छन् । त्यस्तै ओली पक्षका सांसद ३४ जना छन् । त्यसैगरी कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३ र अन्य ५ जना सांसद रहेका छन् ।
दुवै प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ । तर काँग्रेसले अझै कुन पक्षलाई समर्थन गर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । दुवै पक्षले काँग्रेसलाई फकाउन आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन् । काँग्रेसको केन्द्रमा नै नेकपाको अहिलेको दुई पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित रहेकाले काँग्रेसले प्रदेशको बारेमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकोले अहिले नै कुनै एक पक्षमा लाग्न नहुने तर्क गर्दै अघोषित रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज वातावारण बनाएको देखिएको छ ।
यसैबीच अहिले भइरहेका छलफल अनुसार काँग्रेसलाई नेकपाका दुवै पक्षले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश मध्ये एकमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । तर काँग्रेसको प्रदेश तह भने केन्द्रको निर्णय र निर्देशनलाई पर्खिदा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको देखिदैन ।